I-GNOME 3.38, ngoku iyafumaneka kwi-desktop eza kusetyenziswa nguGroovy Gorilla | Ubunlog
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla sele ithatha imilo. Kwaye hayi, eli nqaku alikho malunga nohlobo olulandelayo lwe-Ubuntu, okanye hayi, kuba siza kuthetha ngemeko-bume eza kuyisebenzisa, a GNOME 3.38 ekhutshwe ngokusesikweni kwaye sele ibandakanyiwe kwinguqulelo zokuqala zenkqubo elandelayo ephuhliswa yiCanonical. Iza nezinto ezininzi ezintsha, kodwa enye ihlala inomdla: ukusebenza okuphuculweyo.
Phakathi kwezinto ezintsha, kuyandibetha ukuba ngoku kubandakanya isikhokelo okanye ukhenketho ngohlobo lweapp ukuze sifunde ukuba zisebenza njani ezinye izinto, ezinje ngendlela yokufikelela kwizicelo ezivela kwiZenzo. Kwelinye icala, kukwabangela umdla ukuba icandelo "eliQhelekileyo" lesiqalisi sesicelo liye lanyamalala. Unolunye uphuculo lweGNOME 3.38 emva kokuqhekeka.
Amagqabantshintshi eGNOME 3.38
Ngaphambi kokuba uqale ngoluhlu, kubonakala kubalulekile ukukhankanya ukuba ezinye zezi zinto ziphuculweyo azizukufumaneka kolunye unikezelo, kuba ziyafana zona zithatha isigqibo ngento yokongeza kunye nento engekho. Ezona ndaba zinomdla zezi:
Isicelo esitsha sokusifundisa ukuba yonke into isebenza njani.
Ukuphuculwa kwesindululi sesicelo, njengoko kuchaziwe kwi- esi sixhobo.
Ukuphuculwa kwenkxaso yabafundi beminwe (olunye ulwazi).
Ngoku sinokuqalisa kwakhona ikhompyuter kukhetho olutsha olongezwe kwitreyi yenkqubo.
Ukubonisa ipesenti yebhetri ngaphandle kokufaka nantoni na eyongezelelweyo.
Ulawulo olutsha lwabazali oluza kusivumela, umzekelo, ukuthintela iibrawuza zewebhu, ezinye iinkqubo okanye ukuthintela iiapps ekufakweni.
Inkxaso yokwabelana ngeWiFi ngeekhowudi zeQR.
Uphuculo kwiiapps, ezinje ngeMephu, iiFoto, iwotshi, iEpiphany okanye usetyenziso lwekhusi oluza ngoku nojongano oluhlaziyiweyo.
Irekhoda yesikrini esakhelweyo seGNOME ngoku isebenzisa iPipewire.
Isishicileli-sandi senziwe ngokutsha.
Utshintsho kwimakrofoni icon ukwazi ukuba iyasebenza okanye ithulisiwe.
Ezinye ii-icon zenziwe ngokutsha.
Ukubeka iliso kulawulo lokuhlaziya eWayland kuphuculwe.
GNOME 3.38 isemthethweni y ngoku iyafumaneka ku-Ubuntu 20.10 I-Groovy Gorilla, uguqulelo olwenziwayo ngoku kunye nokukhululwa ngokusemthethweni okucwangciselwe u-Okthobha 22. Abasebenzisi abanomdla wokuyifaka banokwenza njalo ukusuka kwinguqu yayo yePlppak, kodwa kungcono ukulinda ukusasazwa kweLinux ukuyifaka njengokuhlaziya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-GNOME 3.38, ngoku iyafumaneka kwi-desktop ezakusebenzisa iGroovy Gorilla ngophuculo oluninzi
Nmtui okanye nmcli, qhagamshela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ukusuka kwisiphelo sendlela
Isebe elitsha elizinzileyo leTor 0.4.4.5 ngoku liyafumaneka, yazi ezona nguqulelo zibalulekileyo